ရိုက်ကူးရေးလောကထဲက ဖိနှိပ်မှုတွေအကြောင်း ပေါ်တင်ထုတ်ဖော်ပြောပြလာတဲ့ Tao
အမှန်ကို အမှန်အတိုင်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရဲတဲ့ သတ္တိကို ပိုင်ဆိုထားသူ Tao ဟာ အနုပညာလောကရဲ့ သန်းကြွယ်သူဌေးစာရင်းဝင် နာမည်ကြီးတစ်ဦးပါပဲ။ အနုပညာသက်တမ်းရင့်နေပြီဖြစ်သလို သရုပ်ဆောင်ပိုင်းကိုပါ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ Tao ဟာ ရိုက်ကူးရေးလောကရဲ့ ဖိနှိပ်မှုအကြောင်းကို ပရိသတ်တွေရှေ့မှာပဲ ပွင့်လင်းစွာ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ချိုင်းနားမှာဆိုရင် ဇာတ်လမ်းတွဲတွေရိုက်ကူးပြီးတဲ့အခါမှာ ဝိုင်ယဉ်ကျေးမှုက အစဉ်အလာဖြစ်နေပြီး ပါဝင်သရုပ်ဆောင်တဲ့အနုပညာရှင်တွေအနေနဲ့ ဒါရိုက်တာ၊ ပရိုဂျူဆာတွေနဲ့အတူ လက်ခံသောက်သုံးရလေ့ရှိပါတယ်။ မသောက်ချင်ရင်တောင် အတင်းအကြပ်စေခိုင်းရတာမျိုးတွေလည်းရှိကြောင်းကို ပြောရင်း Tao က “အဲ့ဒီအစဉ်အလာကြီးကို အာရုံထဲကို ထည့်မထားဘူး။ ဇာတ်လမ်းရိုက်ဖို့ ကျွန်တော်က တောင်းဆိုတာမှမဟုတ်တာ။ ဘယ်သူတွေပါမယ်? ဘယ်သူက ဦးဆောင်ရိုက်ကူးမယ်? ကျွန်တော်နဲ့ ဘာလိုရိုက်ချင်ရတာလဲ? ဒါတွေကိုပဲ တွေးတယ်။ အခုကတော့ ဝိုင်ယဉ်ကျေးမှုတဲ့။ ဒီဟာကို ထိုင်သောက်ဖို့ အချိန်ကိုမရှိဘူး။ အလုပ်တွေများတယ်။ စားပြီးတာနဲ့ ဘာလို့ အတူတူစုသောက်ရမှာလဲ? မသောက်ရင် ရှေ့ဆက်လို့မရအောင် တားဆီးပစ်မယ်ဆိုပြီး ပြောသေးတာ။
လုပ်ရဲရင်လုပ်ပေါ့… ကျွန်တော် ပွဲမတက်ရင် အဲ့လူတွေပဲ ဒေါသတွေထွက်ပြီး မျက်စိပျက်မျက်နှာပျက် ဖြစ်ကြဦးမှာ။ တော်လိုက်တဲ့ လူတွေ.. ‌ဘာလို့ ဒီလိုလူတွေကို ဇာတ်လမ်းရိုက်ကူးခွင့်ပေးနေရတာပါလိမ့်? ဘာလို့များ ဒီလို နားလည်ရခက်တဲ့လူတွေကို သရုပ်ဆောင်တွေက နေရာပေးဖို့ ခခယယ တောင်းဆိုနေရတာလဲ? ကျွန်တော်ကတော့ ဒီလိုလူတွေရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ရင် ရီပဲရီပစ်လိုက်ချင်တယ်။ ဒီနယ်ပယ်က စီနီယာတော်တော်များများလည်း ဒီလိုဖိနှိပ်မှုတွေ ကြုံရဖူးတယ်” ဆိုပြီး အနုပညာလောကရဲ့ အမှောင်ဖက်ခြမ်းကို ပေါ်တင်ပြောချသွားပါတော့တယ်။
ပရိသတ်တွေကတော့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ ဒီလိုအတင်းအကြပ်စေခိုင်းမှုကို လူသိရှင်ကြားပြောရဲတဲ့ Tao ရဲ့ သတ္တိကို ချီးကျူးနေကြပါတော့တယ်။ တချို့ကတော့ အခုလိုဖွင့်ပြောပြမှုအတွက် Tao မှာ အတားအဆီးတွေရှိလာကြမှာကို စိတ်ပူနေကြပါတယ်။ Tao ကိုယ်တိုင်ကတော့ သူ့ရဲ့ အစစ်အမှန်ဆုံးပုံစံအတိုင်း နေနေတာဖြစ်လို့ ဘာကိုမှ ဂရုစိုက်မယ့်ပုံ မပေါ်ပါဘူး။
Photos: Weibo Studio
Next နှစ်တွေကြာသွားလည်း ယုတ်လျော့သွားခြင်းမရှိတဲ့ CL နဲ့ Park Bom တို့ကြားက ချစ်ခြင်းတရား »
Previous « တကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရာသီဥတုသံတမန်အနေနဲ့ “Dear Earth” ပွဲမှာ မိန့်ခွန်းပြော၊ သီချင်းတွေဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ BLACKPINK
၁၀ နှစ်ကြာတွဲခဲ့ပြီးနောက် မိသားစုဘဝတည်ဆောက်ဖို့ သဘောတူပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်တဲ့ Pancake
“Military Concert” မှာ ​ရေတပ်ယူနီ​​ဖောင်းနဲ့ တည်ကြည်ခန့်ညားလွန်း​နေခဲ့တဲ့ Park Bo Gum
Social Media ပေါင်းများစွာမှာ မင်းသမီးချောလေး Baifern ရဲ့ ကျော်ကြားမှုစစ်တမ်းများ